बिहे गरे सुध्रेला ! - NepalDut NepalDut
बिहे गरे सुध्रेला !
-ई. उषा पौडेल पोखरा
“होइन त्यो माथिघर बद्रीकाकाको छोरा त साह्रै बिग्रिएछ।पहिले पहिले रक्सी चुरोट मात्र खान्थो अचेल त गाँजा तान्न पनि थालेछ। “त्यती मात्र कहाँ हो र ड्रग पनि लिन्छ रे,अस्ती त्यो गल्लीमा बसेर हातमा सुइ हालिराथ्यो रे । काका काकी खुब पिर गर्दै थिए। “अब एउटी राम्री असल केटी खोजेर बिहे गर्दिने रे। बिहे गरेसी कसो नसुध्रियला र।”- हाम्रो समाजमा अधिकांश घरमा सुनिने वार्तालाप हो यो।
बिग्रेको छोरालाई सुधार्ने एक मात्रा उपाय बिहे नै बनेको छ अभिभावकहरुलाई। आफ्नो छोरा जस्तो सुकै होस् बुहारी भने असल,राम्री र पढेलेखेकी चाहिन्छ। छोराको बानी ब्यहोराले बुहारीलाई कस्तो मानसिक तथा शारीरिक पिडा पर्छ त्यो कसैले सोच्दैनन। छोरो बिग्रिएको तेरै कारण हो भनेर श्रीमतीलाई दोष लगाउने हाम्रो समाजमा बिग्रेको छोरोलाई सपार्न बुहारीको नाममा अर्की नारीलाई भित्त्राईन्छ। कती ठाउँमा त केटाका बारेमा झुटो बोलेर पनि विवाह गराईन्छ।विवाह एस्तो सम्बन्ध हो जुन तब मात्र सफल बन्छ जब श्रीमान श्रीमतीबिच विश्वाश प्रेम अनी समझदारी हुन्छ। एक अर्कालाई जानेर बुझेर जोडेको सम्बन्ध त अहिले धेरैजसो असफल भएको देखिन्छ भने झुक्याएर या कसैको लाचारिको फाईदा उठाएर गरिएको विवाह झन सफल हुने कुरै भएन।
यसरी झुक्याएर वा अरु कारणले जोडिएको केही सम्बन्ध सफल भए तापनी धेरै जसो चाँही दु:खत मोडमा पुगेर अन्त्य हुने गर्छन्। केही पुरुषहरुले विवाहपछी आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरे ता पनि अधिकांश केशमा विवाहपछी अझ नराम्रो स्थिती आएको पाईन्छ। हाम्रो वरिपरी हेर्ने हो भने पनि एस्ता अनगिन्ती उदाहरण छन जहाँ जबर्जस्ती छोरा सुधार्न गरिएको विवाहले बुहारी तथा उनिहरुको सन्तानको समेत जिन्दगी अस्तब्य्स्त भएको छ। जहाँ कोहिले दुर्ब्एसनी का कारण ज्यान गुमाएका छन त कोही बेपत्ता नै भएका छन। कोहिले त घरमा श्रीमती हुँदा हुँदै अन्तै बिहे गरेका छन।जे जस्तो परिस्थितीमा पनि नारीको जीवन नै तहसनहस भएको छ। कती पय त यस्ता घटना पनि आएका छन जहाँ पहिले छोरा सुधार्न घरमा भित्त्र्याईएका बुहारीहरु छोराको अवस्था नसुध्रिये पछी सासुससुरा अनी घरबाटै अपहेलित भएका छन र उनिहरुका साथै केटाकेटीको भविष्य पनि अन्धकार भएको छ। लोग्ने मरेको या लोग्नेले छोडेकी नारीलाई समाजमा हेरिने दृष्टिकोण नै फरक हुन्छ। न त उनिहरुलाई समाजमा इज्जत दिईन्छ न त पुरुषलाई जस्तो पुनर्विवाह गर्ने छुट। बुहारी मरेको १३ दिन नहुँदै आफ्नो ५० बर्षको छोराको लागि केटि हेर्न थालिने हाम्रो समाजमा उमेरमै बिधवा भएको बुहारीको पुनर्बिबाहको कुरा सोच्नु मात्र पनि पाप मानिन्छ। आफ्नै वरपर बारम्बार यस्ता घटनाहरु देख्दा देख्दै पनि अन्देखा गरी बिग्रिएको छोरा सुधार्न पहिलो उपाय भनेको विवाह नै हुन्छ अविभावकको लागि।
के पुरुषलाई सुधार्नु मात्रै नारीको काम हो?एक महिलाको जिन्दगीसँग त्यसरी खेलवाड गर्नु कतिको जाएज कुरा हो? ल बिहेपछी लोग्ने सुध्रियो भने त ठिकै छ तर उस्को स्वभाबमा केही परिवर्तन भएन भने उसँग विवाह भएकी नारीको अवस्था कति दयनिय र पिडापूर्ण होला? कति पय अवस्थामा राम्रो भए ठिकै छ यदी नराम्रो भएमा नारीको कर्मको दोष भन्न पछी पर्दैनन मान्छेहरु। जानी जानी आगोमा झोस्ने अनी त्यस्को कर्ममा जल्न लेखेको रहेछ भन्नु सरासर गलत होइन र ? अरुको छोरीको जिन्दगी सँग जुवा खेल्न सक्नेले यो कैले सोच्दैनन कि भोली आफ्नो घरको छोरी चेलीमाथि त्यस्तै समस्या आईपर्न सक्छ।
छोरीको विवाह पछी सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त भएको सोच्ने हाम्रो समाजमा यस्ता कुराहरुले त्यती मान्यता नराख्ला।तर पनि छोरीको विवाह गरेर जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन्छु भन्दा पनि राम्रो शिक्षा दिक्षा दिएर आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ अभिभावक लाग्नु पर्छ।तैपनी बिग्रिएको छोरो सुधार्ने नाउँमा एउटी नारीको जिन्दगी दाउमा लगाउनु कदापी उचित होइन। यस बारेमा पनि सोच्ने हो कि?